JingPad A1 inowanikwa mune yekutanga vhidhiyo vhidhiyo uye ichave yakakodzera iyo | Linux Vakapindwa muropa
Zvishoma nezvishoma padiki padiki nezve iyo piritsi iri kuuya kwatiri iyo inogona kuchinja zvinhu zvakanyanya. Ndiri kuziva kuti zvakafanana zvakataurwa nezve PineTab, asi iyo PINE64 chikumbiro, pasina chero chinhu chakasarudzika, chakavatadzisa kubheja pane yakasimba simba Hardware. Ndicho chimwe chinhu chakaitwa naJing timu, uye iyo JingPad A1 ichave ne hardware izvo zvinokutendera iwe kufambisa yako JingOS pamwe solvency.
Iyo JingPad A1 parizvino iri kutevera gwara remugwagwa. Mushure mekuratidzwa kweiyo inoshanda sisitimu kwaive iko kuchinjika kwehwendefa, asi kusvika nguva pfupi yapfuura isu tanga tangoona mifananidzo inogona kudzokororwa ne Photosh ... GIMP. Izvo zvavakatiratidza kwatiri maawa mashoma apfuura chimwe chinhu chinopfuura icho: yekutanga vhidhiyo vhidhiyo kwatinoona iyo piritsi. Ichokwadi kuti vhidhiyo yekushambadzira, asi iyo keyboard, dhizaini uye nemabatiro ayo anoita sekushanda zvinoita kuti ini ndimbofunga kuti $ 549 kuti vachazvikumbira zvinoita kunge zvidiki. Muchokwadi, zvinotarisirwa kuti VAT ichafanirwa kuwedzerwa kune iyo.
Iyo JingPad A1 ichatengeswa ne $ 549
Muvhidhiyo yapfuura iwe unogona kuona iyo piritsi ine yayo keyboard. Kana vaiburitsa, tinoona kuti ine girazi kumashure uye rakaenzana pamativi mune akachena maitiro eIpad. Isu tinoona zvakare bhatani remagetsi, kwavakaisa iyo chigunwe chekunzwa. Piritsi racho rakaiswa pane rutsigiro uye rakagadziriswa zvakakwana, zvichipa pfungwa yekuti izvo zvatiinazvo muruoko ikombuta diki. Kurudyi, chii chingave chiri pasi petebhenekeri, ndiyo chinongedzo chauchazoshandisa kubatanidza kune iyo keyboard uye kuratidza kuti yakaiswa
Kana iri yekushanda kwayo, chokwadi ndechekuti isu tinoona zvishoma. Iyo Calculator app, tinoona zvimiro zvekutama kubva kuchimwe chikumbiro kuenda kune chimwe, uyezve tinofunga nezve iyo iPad. Nhau dzakanaka ndedzekuti, kana ichinyatso shanda seizvi, zvichave zvinoshamisa. Izvo zvinonakidza zvatichaona mumavhiki mashoma anotevera apo vamwe vane rombo rakanaka vaunowana yavo uye kuongorora. Zvingave zvisinganzwisisike kana vakataura zvakaipa nezvavo, asi isu tinogona kuwana pfungwa yekuita kwavo chaiko.
Chinhu chakashata pane zvese izvi chingori chakapesana, icho zvese zvinotaridzika zvakanaka uye mutengo unogona kukwira kusvika ku € 650 kana uchifanira kuwedzera VAT. Pamutengo iwoyo, isu hatisi kutaura nezve chimwe chinhu chatinogona kutenga pane whim sePineTab, asi ndiri kuchida. Haudi here izvozvi?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » Iyo JingPad A1 inowanikwa mune yekutanga vhidhiyo vhidhiyo, uye zvinoita sekunge ichave yakakodzera iyo mari
Iwe unogona kunge wakanzwa nezveGNOME 40, asi haunzwisise kusvetuka kwavakatora kusvikira iwe uchizama.
Linux Mint 20.2 ichadaidzwa kuti Uma, ichasvika muna Chikunguru uye ichasanganisira iyo app kutumidza mabatch mafaira